Taariikh Ciyaareedka Sadio Mané - BBC News Somali
Sadio Mané waa suuragal inuusan waxbadan sanadkan 2015ka ku guuleysan, laakiin marka uu goolal dhaliyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Southampton. Wuxuuna dhaliyay laba gool oo isku xigta oo ay u dhexeysay wax ka yar seddax daqiiqo, markii koxdiisa ay 6-1 kaga adkaatay Aston Ville bishii April ee sanadkan, waxa uuna galay diiwaan cusub oo Premier League ah oo tobannaan sano aan dhicin.
Taasi waxa ay muujisay dhameystirkii ugu wanaagsanaa ee horyaalada Britain lagu arko inay ka mid tahay, taas oo kale waxaa sameeyay Robbie Fowler oo Liverpool u ciyaarijiray 1994tii.
Arrinta Mane ku weecisay dareenbka caalamka ayaa ah markii uuu ka dhexmuuqday kooxda caalamiga ah ee Senegal kaas oo hadda kamid noqday ciyaaryahanada ugu halissan horyaalka Ingiriiska.
Ciyaaryahanka oo 23 sano jir ah oo si wanaagsanna goolal u dhaliya ayaa Southampton ay kula soo wareegtay 12 milyan oo dollar bishii September ee sanadkii 2014kii.
Markii goolasha isku xigxiga uu hal ciyaar dhaliyay waxa ay soo jiidatay arrintaasi warbaahinta caalamka, laakiin waxa uu ka maqnaa ciyaartii kooxdiisa ay Chelsea la yeelatay bishii October ee sanadka oo 3-1 ay ku adkaadeen.
Mané, oo qeybkastoo dhanka weerarka ah ka ciyaari kara, waxa uu ahaa ninka ciyaaraha kaddib markii Jose Mourinho uu jeclaaday markii uu Chelsea oo gurigeeda joogto uu gool ka dhaliyay xilli ciyaareedkii hore.
Marka la raaciyo goolkiisii uu ku barbareeyay Liverpool, waa mid ka mid ah goolasha Mane uu dhaliyay 12kii kullan ee la ciyaaray ee horyaalka Ingiriiska, sidoo kale afar jeer ayuu caawiyay goolala la dhaliyay.
Taasi waa dadaalkiisa uu ugu jiro inuu qaado goobka Premier League-ga, sidoo kale dadaalkaasi ayuu horey u soo billaabay markii bishii December ee sanadkii hore uu gacan ka geystay gool ay ku badiyeen waxayna ahayd midkii keli ahaa ee uu caawiyay 19 kulan ee ay dheeleen.
Isku darta 10ka goo lee ugu sareysa ee ee uu u dhaliyay Southampton shank a mid ah waxa ay caawiyeen in kooxda ay ka qeybgasho horyaalka Europa oo ah markii labaad oo kooxda ay ka qeybgasho tani iyo sanadkii 1980kii.
Deganaantiisa, lugtiisa xirfadda ku dheehantahay iyo weerarkiisa, ciyaaryahanka Galbeedka Afrika ka soo jeeda waxa ay taasi u suurta gelisay in lala xiriiriyo inuu xilli ciyaareedkan aadayo kooxda Manchester United, inkastoo Southampton ay arrintaasi diiday si ay loolankooda horyaalada Yurub u sii xoojiyaan.
Rayiga Khuborada– Piers Edwards, BBC Africa Sport:
In Sadio Mané uu noqdo qofka ay Manchester United raadineyso la yaab malahan, oo waxa ay sii adkeyneysaa xirfadda uu leeyahay. Maahan oo keli ah xawaaraha dheereeya ee uu ku ordo ee khibradiisa ciyaareed waa tan uu tababaraha kooxda Southampton Ronald Koeman uu hoosta kacalaamadeeyay.
Riyada tababaraha ee taasi ah ayaa keentyay inuu ka ciyaaro dhammaan dhinacyada weerarka, sidoo kale ciyaaryahanka Galbeedka Afrika ka soo jeeda, goolal dhallinta waxaa u dheer inuu soo hagaajiyo oo uu shabaqa la dhexgalo.
Mané ayaa hadda si tartiib ah u noqonaayaa ciyaaryahannada ugu wanaagsan premier League, sababtoo ah 31 kullan oo uu ciyaaray waxa uu dhaliyay 12 gool, shanna wuu caawiyay.